Maalinta Calanka Soomaaliyeed Oo Laga Xusay Magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Ra’iisul Wasaraha Xukumadda Fedaraalka Soomaaliya, Xubno ka tirsan Goleyaasha Dowladda, Guddoomiyaha Gobalka Banaadir iyo boqolaal dadweyne ah ayaa xalay ka qayb galay munasbad lagu soo bandhigayey Golaha Dhalinyaradda Qaranka islamarkaana lagu xusayay maalinta Calanka Soomaaliya, taasi oo lagu qabtay garoonka kubadda golayga Aadan Xaaji Yabaroow Wiish.
Munaasibadda oo ay wadajir u soo qaban qaabiyeen Wasaradda dhalinyaradda iyo xayaaraha xukumadda Fedaraalka Soomaaliya iyo maamulka Gobalka Banaadir ayaa lagu soo bandhigay halgankii iyo taariikhdii calanka Soomaaliya.
Guuddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan oo qudbad ka jeediyay munaasibadda ayaa hambalyo u diray umadda Soomaaliyeed, isagoo si gaar ah dardaaran iyo bogaadin u diray dhallinyarada Soomaaliyeed.
Xalay oo kale, Sanadka walba waxaa dalka laga xusaa maalinta Calanka, waa maalin ka tarjumeysa Qarannimo, Midnimo iyo gumeysi naceyb, 63-sano ayaa ka soo wareegatay markii la sameeyay Calanka Soomaaliyeed, Calankeeda kaas oo leh Sooyaal qiimo badan oo dal iyo dibadba Qowmiyahada Soomaalidu ku faanto.
Calankan Buluugga ah ee xidigta ka tarjumeysa Soomaali weyn dhexda uga xardhan tahay waxaa la sameeyay 12 October, 1954.